Antistatic အေးဂျင့် မှအကောင်းဆုံး Antistatic အေးဂျင့် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ Antistatic အေးဂျင့် နှင့် Optimum စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များအာမခံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တန်းမြင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကို အသုံးပြု. လုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။ ဤကျယ်ပြန့်မတူညီကြစက်မှုလုပ်ငန်း applications များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီစံချိန်စံညွှန်းများ၏ထုတ်လုပ်သည်နဲ့အလွယ်တကူ client ကိုလိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အများစုမှာစျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်မှာပူဇော်စေ။
ဤအေးဂျင့် CL-602 သည်အလွန်မြင့်မားသော hydrophilic quaternary ammonia anion မဟုတ်ပါ-ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဂရုတစိုက်တီထွင်ထားသော ionic antistatic agent.၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုရှိသည်-အဆိပ်.၎င်းသည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကိုကာကွယ်ရန်အလွန်ကောင်းသောဖြည့်စွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်.ဤအေးဂျင့်ကိုအဓိကအားဖြင့် cellulose fiber fabrics မှငြိမ်လျှပ်စစ်ကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်,သည်အခြားဒြပ်အမျှင်,ရောနှောထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်သိုးမွှေး-ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်,နှင့်ပျော့ပျောင်းသောလက်ခံစားမှုတိုးမြှင့်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/antistatic-agent.html
အကောင်းဆုံး Antistatic အေးဂျင့် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် Antistatic အေးဂျင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်